कुकुर सँगको यौन सम्पर्क र यौनरोग ​​​​​​​ - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म १९ वर्षको भए । म १३ वर्षको हुँदा कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको यियो । दुई–तीन पटक लिङ्ग पसाउँदा वीर्य स्खलन होला जस्तो भएर बाहिर निकालेको थिएँ । त्यसको केही महिनापछि मेरो वीर्यमा ठोस पदार्थ (चामल जस्तो) देखियो । कुकुरसँग सम्पर्क हुँदा यस्तो हुन्छ र ? अनि यसबाट कुनै यौनरोग (SITI) सर्छ ? यौनरोग (SITI) पिसाब जचाउँदा थाहा हुन्छ भनिन्छ, पिसाबमा यसको असर देखिन्छ ? असर परेको वा नपरेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?